Muuri News Network » WAR CUSUB: Xildhibaano ka Tirsan BF oo feer iskala daalay Sabab Yaab leh.
WAR CUSUB: Xildhibaano ka Tirsan BF oo feer iskala daalay Sabab Yaab leh.
Laba xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada Mooshinka ka keenay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dagaal gacan-ka-hadal ah ku dhex maray kulan ay la lahaayeen Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari).
Arrintan ayaa ka dambeysay kulan Villa Hargeysa ku dhex maray guddoonka Baarlamaanka iyo xildhibaanada mooshinka madaxweynaha oo lagu gudbinayay Jawaab caddeymo wadata oo xildhibaanadaasi ku sharxayaan qodobada ay ku soo eedeeyeen madaxweynaha sida uu ka codsaday guddoomiyaha Baarlamaanka.
Kulankaasi ayay qaar ka tirsan xildhibaanada Mooshinka wada ku gudbiyeen jawaabta caddeymaha eedeynta Madaxweynaha, waxaana xubnaha soo qoray eedeymaha ka mid ahaa Xildhibbaanada kala ah: Cabdi Xoosh, Fowsiyo Xaji, C/llaahi Goodax, Kabaweyne iyo koox kale, laakiin waxaa arrintaasi ku baraarugay xildhibaanada kale ee shirka joogay oo aan waxba kala socon jawaabta loo gudbiyay Guddoomiyaha Baarlamaanka.
Waxaa muran ka dhex dhashay xildhibaanadii Mooshinka dhexdooda oo qaarkood ay is-weydiiyeen jawaabta iyo cidda diyaarisay, waxaana ugu dambeyn ay dhalisay inay gacanta isula tagaan laba xildhibaan oo lagu kala magacaabo C/kaafi Macalin Xasan iyo Xildhibaan C/kariim Daahir Shariif.
Kulankii ayaa isku bedelay fowdo iyo qas waxaana Guddoomiyaha Baarlamaanku u sheegay xildhibaanada mooshinka wada in jawaabta ay keeneen aysan ahayn wixii la weydiiyay ee laga sugayay, dibna u soo celiyaan jawaab sax ah oo ay ku mideysan yihiin.